Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tranga tsy fahita firy an'ny karazana COVID-2 vaovao any Italia
Raha nahamarika karazana fiovaovan'ny COVID-19 tsy fantatra vaovao i Italia, dia eo am-piomanana ny fiomanana hiara-miasa amin'i Russia amin'ny fampidirana ny vaksinin'ny Sputnik ao amin'ny EU.
Ny karazany vaovao an'ny COVID-19 izay hita voalohany tany Thailand ary nohafarana avy tany Egypt dia efa fantatra any Italia.
I Italia dia miasa am-pahavitrihana amin'i Russia amin'ny fitantanana vaksinin'ny Sputnik COVID-19 vita amin'ny Rosiana.
Ny vaksinin'ny Sputnik V tato anatin'ny herinandro vitsivitsy dia nodinihin'ny manampahefana eropeana ary hamela ny fitantanana ho an'ny olom-pirenena.
Ny karazana virus SarsCov2 tena tsy fahita firy izay tsy fantatra afa-tsy amin'ny toerana mitokana any Thailandy dia nofaritan'ny Laboratoara Mikrobiolojia an'ny ASST Sette Laghi ao amin'ny faritan'i Varese any amin'ny distrikan'i Lombardy any Italia.
Io variant io, araka ny nambaran'ny ASST taorian'ny fandalinan'ny mpikaroka notarihan'ny Profesora Fabrizio Maggi, dia tsy mitovy amin'ny filaharan'ny proteinina spike iray manontolo - io ampahan'ny SarsCov2 io izay mifandray amin'ireo sela hanafika.
Tao anatin'ny fotoana fohy no nanamafisana ny zavatra hita, nohamafisina, ary namboarina indray ny génome manontolo.
Raha toa tsy misy toetra mampiavaka ny vaksinin'ny vaksiny ny variant dia maneho fiovan'ny fototarazo rehetra izy io. Ny tranga faharoa hita dia tany Thailand ary hitan'ny mpitsangatsangana marary niverina avy tany Egypt.
"Ny famantarana an'io variant io izay misy tranga iray hafa nofaritana eran'izao tontolo izao no fiandohan'ny fikarohana sy hevi-baovao", hoy i Maggi. "Manokana, ankehitriny fa ny genome iray manontolo amin'ity karazana virus ity dia namboarina indray, azontsika atao ny mahatakatra ny dikany biolojika amin'ny fanadihadiana vitro ary mampiseho ny mety ho fiantraikan'ny klinika sy ny epidemiolojika amin'ny mponina."
"Nasehon'i Lombardy indray ny hatsaran'ny rafitr'izy ireo," hoy ny Councilor for Welfare, Letizia Moratti, "amin'ity raharaha ity miaraka amin'ny ASST Sette Laghi sy ny University of Insubria ary ny Hopitaly San Raffaele any Milan miaraka amin'ny valiny mifandraika amin'ny sehatra iraisam-pirenena. ”